१० दिनपछि स्वदेश फर्किंदा पनि प्रधानमन्त्रीले दिएनन् कुनै प्रतिक्रिया !
काठमाडौं– सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमवार स्वदेश फर्केका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किनुअघि उनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीको अब्बल स्वास्थ्य परीक्षण भएको सन्देश ट्वीटरमा लेखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अब्बल स्वास्थ्य परीक्षणको लागि एनयूएचलाई धन्यवाद ! हार्दिक आतिथ्यताका लागि सिंगापुर सरकार र जनताप्रति आभार ।’ रिमालले लेखेका छन् ।
विभागको जिम्मेवारीलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भइरहेको समयमा विमानस्थलमा गौतमको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । गौतमले नेकपाको संगठन विभागको जिम्मा पाउने लगभग पक्का भइसकेको छ । विभाग गठनमा सहमति कायम गर्न भोलि सचिवालय बैठक बस्दैछ ।